Muraayadaha muraayadaha indhaha ee ragga: hagaha xulashada noocyada ugu wanaagsan | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | Dhameystirka, fashion
Mararka qaarkood muraayadaha indhaha kaliya uma adeegaan inay naga ilaaliyaan iftiinka oo ay si wanaagsan wax u arki karaan, laakiin sidoo kale waxay qayb ka yihiin qaabka marka ay tahay labiska. Kuwa badan baa jira muraayadaha indhaha ee ragga kaas oo la jaan qaadaya jimicsiga iyo qaababka kala duwan. Helitaanka midka kugu habboon adiga way adkaan kartaa maaddaama ay jiraan malaayiin noocyo, midabyo iyo walxaha u muuqda kuwo soo jiidasho leh marka hore laakiin laga yaabo inay leeyihiin waxyaabo aan fiicnayn oo lagu hagaajinayo.
Sidaa darteed, qodobkaan waxaan kaa caawinaynaa inaad ka dhex hesho muraayadaha indhaha ee ugu fiican ragga kuwaas oo sida ugu wanaagsan ula qabsan kara dhadhanka kala duwan.
1 Muraayadaha muraayadaha indhaha ee ragga
2 Tilmaanta xulashada muraayadaha indhaha
3 Nooca muraayadaha Maui Jim
4 Noocyada iyo looxyada
Muraayadaha muraayadaha indhaha ee ragga
Waan ognahay inay jiraan noocyo badan oo muraayadaha indhaha ah oo ragga ah waana inay si fiican ugu habboon yihiin jimicsiga wajigaaga iyo qaabka labiskaaga. Waxaa jira kumanaan qaab, midabyo, agabyo, qaabab la jaan qaadi kara waxyaabaha aad ka filayso isla markaana dabooli kara baahiyahaaga. In kasta oo la doorto muraayadaha kugu habboon adiga ayaa noqon kara xoogaa dhib badan, maaddaama ay jiraan malaayiin moodalyo iyo iskudhaf ah, waxaan ku siineynaa tilmaamo aasaasi ah oo ah waxa ay tahay inaad tixgeliso si aad u doorato moodal wanaagsan.
Tilmaanta xulashada muraayadaha indhaha
Midda ugu horreysa oo dhan waa in la ogaado haddii aad u baahan tahay muraayadaha rijeeto qoro ama kuwa aan dhakhtar qorin ee ragga. Tani waa mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan marka la dooranayo moodooyinka. Labada nooc iyo midkoodba waxay yeelan doonaan qaabab kala geddisan dastuurkooda awgood. Markii aan ogaanno haddii aan u baahanahay muraayadaha indhaha ama haddii kale, waa inaad tixgelisaa qaabka wejigaaga.
Ma jiro sharci tilmaamaya nooca muraayadaha oo u dhigma nooca wejiga, laakiin waa inaad raadisaa kuwa aad ku kalsoon tahay. Si aad uhesho muraayadaha indhaha ee ragga waa inaad fiirisaa sifooyinka qeexa wajiga. Xaaladahaasi waa khadka daanka ee garka. Waa waxa keena wada noolaanshaha dhabannada iyo ballaca wejiga. Waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso iyo waxa ka muhiimsan ayaa ah in qaabka muraayadaha indhaha ay ka soo horjeedaan qaabka wejigaaga.
Tusaale ahaan, haddii aad leedahay weji xoogaa wareegsan, waxaad ka iibsan kartaa muraayadaha tooska ah oo leh xagallo labajibbaaran si loo yareeyo astaamahaaga oo aad u yeelato qaab ka fiican. Haddii aad iibsato muraayadaha wareega waxaad heli doontaa saameyn lid ku ah. Haddii wejigaagu yahay wax saddexagal leh, waxaa fiican in la doorto muraayadaha oval ama wareega oo magdhow ka bixin doona qaabka wejigaaga. Dhinaca kale, haddii aad leedahay weji laba jibbaaran oo aad rabto daan iyo garka oo aad u qeexan, muraayadaha wareega ayaa si aad u fiican ufiican kara, halka muraayadaha muraayadaha ah ay u adeegaan inay xoojiyaan qaabka garka iyo daanka.
Nooca muraayadaha Maui Jim
Sida ay muhiimka u tahay inaan leenahay qaab wanaagsan dharkeena, waa inaan sidoo kale isku darnaa muraayadaha indhaha iyo qaabka labiska. Waxaa jira noocyo badan oo laga kala xusho waana inaad isku darsataa muraayadahaas oo leh qaab ku habboon wejigaaga. Mid ka mid ah moodooyinka waayadan dambe sumcadda ku kasbanaya ee moodada ku jira ayaa ah tusaalaha muraayadaha indhaha ee ragga Mawii Jim. Waa nooc ka mid ah muraayadaha indhaha oo bixiya difaac sare xagga hore iyo xagga dambe ee muraayad kasta si looga hortago dufanka iyo biyaha iyadoo loo sii wanaajinayo iska caabbinta xagashada iyo kuuskuusyada maalin kasta. Waa muraayado leh cimri dherer sare oo kuu oggolaanaya adiga inaad ku raaxaysato waxqabadyadaada oo aad raadiso khibrado cusub.
Moodelkan muraayadaha indhaha ah wuxuu bilaabay inuu ku faafo 80s, xeeb yar oo ku taal Hawaii. Waqtiga laga gudbayo, moodooyinkiisu waxay noqdeen kuwa casriyeysan oo waxay noqotay kacaan dhameystiran oo midab iyo iftiin adduunka oo dhan looga baahan yahay. Waxaa jira in kabadan 125 moodal oo leh teknoolojiyad PolarizedPlus2. Tiknoolajiyaddan waxaa loo isticmaalaa in lagula dagaallamo iftiinka qorraxda iyo falaadhaha UV tan iyo markii muraayadaha indhaha ay ka tarjumayaan midabada ugu firfircoon ee badanaa khalkhal geliya isha.
Dad badan ayaa jecel nuucaan noocaan ah tan iyo markii nashqadeynta lagu garto inay la mid tahay xorriyadda iyo hufnaanta muuqaalka. Thanks to tiknoolajiyadeeda waad awoodaa dayactir midabyo muuqaal ah oo soo saara faahfaahinta, xannibaadda ololka iyo falaadhaha waxyeelada leh ee saameeya caafimaadkeenna muuqaalka. Intaa waxaa dheer, waxay u adeegtaa in la isku daro sida qalab gaar ah. Waxay leedahay daahan lidka-milicsiga ah ee gadaasha lens-ka waxaana lagu dhisay waxyaabo tayo sare leh. Waxaas oo dhan waxay siinayaan nolol dheer oo adeeg ah.
Qof kasta oo doorta muraayadaha Maui Jim wuxuu qiimeynayaa dhammaan shaqooyinka inta badan diiradda la saaray raaxo, saxnaan iyo caddayn. Waxay leedahay damaanad taxane ah oo ka dhigi doonta go'aanka ugu fiican marka aad iibsaneyso muraayadaha indhaha.
Xusuusnow in doorashada muraayadaha indhaha ee ragga iyadoo loo eegayo moodada sidoo kale ay lagama maarmaan tahay maadaama ay tahay inaad isku darsato nooca dharka kugu habboon adiga. Mashiinka ayaa kaa caawin kara inaad sii qurxiso wajiga.
Noocyada iyo looxyada
Si aad u awoodo inaad kala doorato looxyada kala duwan ee jira, waa inaad tixgelisaa codka timaha. Qaar ka mid ah talooyinka ugu fiican ee lagu doorto qaabka saxda ah iyadoo loo eegayo midabka timaha waa kuwan soo socda:
Midabada mugdiga ah iyo kuwa muuqda ayaa kufiican kuwa haysta midab timo bunni ama midab ah. Midab buluug ah ama midab buluug ah ayaa kaamil noqon kara.
Haddii aad leedahay midab timo cad lehWaad kala dooran kartaa midabada mugdiga ah maxaa yeelay waxay sameyn doonaan isbarbardhig weyn waxayna soo jiidan karaan fiiro gaar ah. Cagaar ama casaan waxay noqon karaan midabbo geesinimo leh.
Waxaad yeelan kartaa timo cirro leh. Xaaladahan oo kale xulashada ugu fiican ayaa ah dooro looxyadaas kuwa midabkoodu yahay cawl ama iftiin.
Sida moodada, marka lagu daro khadadka caadiga ah waxaa jira qaabab cusub marka loo eego muraayadaha indhaha ragga. Qalabka laga sameeyo ayaa muhiimad weyn leh. Kuwani waa moodooyinka soo socda sida ku cad moodada:
Adkeysi - waxay ku habboon tahay ragga geesinimada leh ee doonaya inay ka tagaan raadkooda
Oval iyo baastada - loogu talagalay roogayaasha adag
Weyn oo laba jibbaaran - ugu moodada badan
Aviator - nooc cusub oo cusub
Wareeg - raggaas oo ku raaxeysanaya qaab gadaal ah
Baastada iyo birta - isbeddelka ugu xoogan sanadkaan
Tilmaamahan waxaad ku kala dooran kartaa moodooyinka ugu fiican ee muraayadaha indhaha ee ragga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Xullo muraayadaha ugu fiican ragga xagaagan